Barnaamijka Kuujuujinaya wuxuu bixiyaa daryeel caafimaad DHAMMAAN - LHC Barnaamijka Kuujuujinaya wuxuu bixiyaa daryeel caafimaad DHAMMAAN - LHC
Barnaamijka Sicir-dhimista Qiimeynta ayaa loo heli karaa dhammaan bukaannada Xarunta Caafimaadka ee Lancaster (LHC) oo leh dakhli ka hooseeya ama ka hooseeya 200% tilmaamaha saboolnimada federaalka. Tilmaamahaani waxay tixgeliyaan daqliga reerka iyo sanadkasta tirada reerka. Barnaamijka Qiimeynta Ujrada dhimista ayaa loo heli karaa labadaba oo aan caymis ku jirin iyo bukaannada caymiska. Waxaan u adeegsanaa sicir-dhimista si aan u booqano kharashaadka, waxyaabaha laga gooyo, dammaanad-qaadista, iyo rijeeto qorista annaga oo isticmaalaya 340B iskaashi oo leh farmashiyaha daawada iyo dawada CVS. Dhammaan kharashyada soo haray waa in la bixiyaa ka dib marka aan dalbanno dhimista.
Bukaannadu waa inay wadaagaan cabirka reerkooda (oo ay ku jiraan xaaska iyo dhammaan dadka ku tiirsan) oo ay siiyaan dukumiinti dukumiinti ah dhammaan xubnaha qoyska. Waxay dalban karaan Barnaamijka Qiimeynta Ujrada Qiimayaasha (slide Fee Discounts Program) inta lagu jiro diiwaangelinta ballan kasta (fadlan keen dukumiintiyada dakhliga).
Abaalmarin ama warqad faa'iido Tusaale: Macaashka SSI / SSDI (laga bilaabo sanadka hadda ah) ama
Haddii aadan awoodin inaad bixiso mid ka mid ah foomamkaan dukumiintiyada dakhliga ah, fadlan ka codso xubin ka mid ah Shaqaalaha Xarunta Caafimaadka ee Lancaster
Bukaannadu waa inay dib u codsadaan sanad kasta Barnaamijka Yaraynta Lacagta Qiimaya.